Ngingathola imijovo ye-insulin yesifo sikashukela somzimba? > Imibuzo
I-mestitus yesifo sikashukela sokubelethisa - isimo esiyingozi ngokuyinhloko enganeni, hhayi kumama - yingane ehlushwa ushukela wegazi kumama. Ngakho-ke, ngesikhathi sokukhulelwa, amazinga kashukela egazi aqine kakhulu kunangaphandle kokukhulelwa: amazinga okushukela asheshayo - aze afike ku-5.1, ngemuva kokudla - aze afike ku-7.1 mmol / l. Uma sithola isilinganiso sikashukela segazi esiphakeme kowesifazane okhulelwe, khona-ke ukudla kuqala kunqunyelwe. Uma, ngokubhekene nesizinda sokudla, ushukela ubuyela kokujwayelekile (ushukela wokuzila - aze afike ku-5.1, ngemuva kokudla - aze afike ku-7.1 mmol / l), khona-ke owesifazane ulandela ekudleni futhi alawule ushukela wegazi. Okusho ukuthi, kulesi simo, i-insulin ayinqunyelwe.
Uma ushukela wegazi ungabuyelanga emuva ngokujwayelekile ngemuva kokudla, khona-ke kuyabekwa ukwelashwa kwe-insulin (amaphilisi aqukethe izidakamizwa ezinciphisa ushukela awavunyelwe kwabesifazane abakhulelwe), futhi umthamo we-insulin ukhuphuka kuze kufike lapho ushukela wehla uye kulitshe ngesikhathi sokukhulelwa. Vele, udinga ukulandela indlela yokudla - owesifazane uthola i-insulin, alandele ukudla futhi alondoloze ushukela wegazi ngaphakathi kobubanzi obujwayelekile kwabesifazane abakhulelwe.
Yiziphi izimpawu zesifo sikashukela sokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe?
Lokhu kuphazamiseka kwe-metabolic akunazimpawu zangaphandle ngaphambi kokuba i-ultrasound ikhombise ukuthi fetus inkulu kakhulu. Okwamanje, kusenokwenzeka ukuqala ukwelashwa, kepha sekudlule isikhathi kakhulu. Ukwelashwa kuqalwa kahle kusengaphambili. Ngakho-ke, bonke abesifazane baphoqelelwa ukuthi bavivinye ukubekezela okuphakathi kwamaviki angama-24 kuye kwangama-28 wokukhulelwa. Ukwanda koshukela wegazi kowesifazane okhulelwe kungasolwa uma lowesifazane eba nesisindo ngokweqile. Kwesinye isikhathi iziguli zinaka ukoma okuchama kanye nokuchama kaningi. Kepha lokhu akuvamile. Awukwazi ukuthembela kulezi zimpawu. Ukuhlolwa kokubekezelela ushukela kudinga ukwenziwa noma kunjalo.
Nganikezwa nalokhu kuxilongwa. Ngidla ukudla. Ushukela kuyinto eyejwayelekile. Kepha izithelo zisho ukuthi zinkulu. Mhlawumbe ngiqhubeke nokudla sekwephuzile. Ake usitshele ukuthi isifo sikashukela siyithinte kanjani ingane. Ekhathazeke kakhulu.
Nginekhukhi elifanayo nale GSM!
Ku-B wokuqala, eminyakeni eyi-10 eyedlule, ushukela wokuzila usheshe wakhuphuka wafinyelela ku-6.4, kepha ngaqhubeka nokudla, ngakwehlisa ngawa ngemuva kwami. I-GDM ayitholakalanga
Manje odokotela baxinwe yilolu ushukela, behlise izindinganiso zabesifazane abakhulelwe. Ungabi ngaphezu kuka-5.1 esiswini esingenalutho nangaphambi kokudla
Nginikezwe i-GDM ngesisekelo sokwanda ushukela ka-5.5 esiswini esingenalutho kanye ne-hemoglobin ejwayelekile ye-glycated. Amaphoyinti ayedayiswa kanti ukuxilongwa kwawo ngeke kususwe ngisho noshukela ojwayelekile.
Ngimelene ne-insulin. Kepha anginawo ushukela omningi, isilinganiso esiphezulu sikhuphukela ku-6.0.
Nganikezwa umsebenzi wokulawula ukudla noshukela nge-glucometer ekhaya. Ngenqabile ukulaliswa esibhedlela ngamaviki angama-32 (ngangihlelela aboshukela ngesifo esisha). Uma ngilandela ukudla, ngiba noshukela ongu-4,7 ekuseni, uma ngingalandeli, sengibhalile. Kulokhu ngama. Angizivumelanga ukuba ngijove i-insulin uma nginyathela ushukela ekudleni okuqinile, futhi ngemuva kwamaviki angama-36 kulula ukuletha kune-insulin nokuyihudula kuze kube ngamaviki angama-40, akucaci ukuthi kungani.
Angazi ibhaluni yomoyaunoshukela muni! Mhlawumbe amanani akhuphukela ku-10, khona-ke angazi ukuthi ngenzeni manje, amathe uma umchamo mubi nge-acetone.
Lapho i-insulin ibekelwa isifo sikashukela sokukhulelwa
Imijovo ayinqunyelwe ngokushesha ngemuva kokutholwa kwalesi sifo, ekuqaleni kunconywa abesifazane ukuthi badle kanye nokuzivocavoca umzimba, umuthi we-herbal. Ngemuva kwamaviki ama-2, kufanele uthathe isivivinyo sokubekezelela ushukela. Uma ushukela wegazi osheshayo udlule ku-5.1 mmol / L, kanye nemizuzu engama-60 ngemuva kokuthatha isisombululo se-glucose - 6.7 mmol / L, khona-ke kunconywa ukwelashwa kwe-insulin.
Abesifazane abanemiphumela engabazekayo kufanele bahlolwe igazi. Imininingwane eyengeziwe inganikezwa ngocwaningo lwe-glycated hemoglobin.
I-insulin iboniswa phambi kwezimpawu eziqondile - ukuthuthukiswa kwengane okungahambi kahle. Ngenxa kashukela wegazi ophakeme, kuvela isimo esibizwa ngokuthi yi-diabetesicopopathy. Izimpawu zayo zinganqunywa yi-ultrasound kuphela:
ikhanda linemibuthano emi-2,
umgqa wentamo obukhulu,
isibindi esandisiwe, ubanzi, inhliziyo,
isikhumba sivuthiwe, siminyene,
i-polyhydramnios ivele futhi iyakhula, kanti ezinye izimbangela zayo azifakiwe.
Ucwaningo lokusebenza kwe-insulin lufakazela ukuthi okwedlule umuntu wesifazane aqala ukusisebenzisa ngemuva kokutholwa isifo sikashukela, kunciphisa ubungozi be-pathologies enganeni yakhe engakazalwa.
Amaphilisi okunciphisa ushukela ngesikhathi sokukhulelwa ayahlolwa. Lokhu kungenxa yokuthi zibangela ukukhula kwezicubu ze-pancreatic ku-fetus.
Futhi nakhu okunye mayelana nokudla kwesifo sikashukela sokukhulelwa.
Unganciphisa kanjani ushukela ngaphandle kwe-insulin ngesikhathi sokukhulelwa
Lapho embula ushukela wokuthambisa noma usongo lokukhula kwayo, zonke iziguli kudingeka zishintshe indlela ezidla ngayo, zandise umsebenzi ngokomzimba, futhi zisebenzise amakhambi anethonya le-hypoglycemic.
Isincomo sokuqala sazo zonke izinhlobo zokuphazamiseka kwe-metabolic ukubukeza ukudla. Yonke imikhiqizo equkethe ushukela, i-confectionery, amazambane, izithelo ezimnandi, uju kufanele isuswe ngokuphelele kuyo. Kunconywe ukunciphisa ingxenye yokudla okuhleliwe:
izibiliboco zenyama nezinhlanzi
Inyama enamafutha, othosiwe kanye nezitsha ezinesipayisi nazo zivinjelwe.
imifino emisha ebilisiwe
ushizi we-cottage shizi 2-5%, iziphuzo zobisi ezibilisiwe ngaphandle kwezithako zezithelo noshukela,
inyama enciphile, inhlanzi, izinkukhu, ukudla kwasolwandle,
okusanhlamvu okuvela okusanhlamvu okuphelele (ngaphandle kwe-semolina, umzala, ilayisi elimhlophe),
isinkwa se-rye ne-bran
uwoyela wemifino, amantongomane,
amajikijolo, izithelo ezingafakiwe.
Udinga ukudla amahlandla ama-6 ngosuku - izidlo ezintathu eziyinhloko, ukudla okulula okumbili kanye nesiphuzo sobisi esimuncu ngaphambi kokulala. Izitsha kufanele zilungiswe kabusha, aqukethe imikhiqizo etshalwe endaweni yokuhlala. Uma imenyu elula nokudla okulula imifino nobisi okuvela kuyo, kulula kakhulu ukuyifinyelela izinkomba ozifunayo.
Ukungezelela lonke izinga lomsebenzi kusiza ukunqoba ukumelana kwezicubu kwe-insulin yazo. Yile ndlela esekela ukwenzeka kwesifo sikashukela sokukhulelwa. Ukuzivocavoca futhi kusekela ithoni ejwayelekile yomzimba, kuvimbela ukweqiwa kwamafutha ngokweqile.
Bheka ividiyo mayelana nenkinga yokuzivocavoca yabesifazane abakhulelwe:
Imithwalo enconyiwe ifaka ukuhamba, ukubhukuda, i-yoga, ukwelashwa okwenzelwe abesifazane abakhulelwe. Isikhathi sonke samakilasi okungenani imizuzu engama-150 ngeviki ukuthola umphumela wokwelapha.
Ukwakheka kwezimali kufaka amakhambi anomthelela omuhle ezinqubweni ze-metabolic. Kumele kukhunjulwe ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa unikezwa udokotela kuphela. Amakhambi asebenza kahle afaka:
izithelo namaqabunga ama-blueberries, ama-lingonberry,
amaqabunga e-birch, walnut, currant, sitrobheli wasendle,
okhalweni ovukile, i-hawthorn,
Zingathathwa ngawodwa noma ukwakheka kwamakhambi angama-2-3. Ama-phytopreparations we-Multicomponent angadala ukungahambi kahle komzimba, ngakho-ke kungcono ukukhetha amakhompiyutha ama-1-2 bese uwaguqula phakathi kwawo.
Izici zobungozi zesifo sikashukela sokukhulelwa zibhalwe ngaphezulu. Abesifazane lapho abakhona badinga ukuthatha isivivinyo sokubekezelela ushukela egabeni lokuhlela lokukhulelwa. Ngesikhathi sokuhlolwa lokhu, kuthathwa ukuhlolwa kwegazi okusheshayo, khona-ke isiguli sinikezwa isisombululo se-glucose ukuphuza, igazi liphinde lithathwe ngemuva kwamahora 1 no-2. Kubantu abane-metabolism ye-carbohydrate engasebenzi kahle, ushukela uyaphakanyiswa ngemuva kokudla ushukela. Mhlawumbe isivivinyo sizokwazi ukuthola uhlobo 1 lwesifo sikashukela esingahle singabonakali. Uma kungekho izici zobungozi, ukuhlolwa kokubekezelela i-glucose akuthathwa esiteji sokuhlelela, kepha sekuvele ngesikhathi sokukhulelwa, ekuqaleni kwe-trimester yakhe yesithathu.
Kuyini ukuhlolwa kokukhulelwa kwesifo sikashukela?
Thatha isivivinyo selabhu esibonisa ukubekezelela ushukela. Kuthatha amahora amabili noma amathathu futhi kudinga amasampula egazi amaningana. Odokotela abahlukahlukene benza lolu cwaningo ngesisombululo sama-50, 75 noma ama-100 amagremu kashukela. Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated kulula kakhudlwana, kepha kulokhu akulungile, ngoba kunikeza imiphumela sekwephuze kakhulu.
Esiswini esingenalutho Ngezansi kuka-5.1 mmol / L
Ihora eli-1 ngemuva kokudla Ngezansi kwe-10.0 mmol / L
2 amahora emva kokudla Ngezansi kwe-8.5 mmol / L
Ngemuva kokudlula esivivinyweni sokubekezelela i-glucose, ukuxilongwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kwenziwa lapho okungenani elinye lamagugu lidlula inani lokubhala elikhonjisiwe. Esikhathini esizayo, imithamo ye-insulin ikhethwa ngendlela yokuthi yehlise emazingeni ajwayelekile okushukela, 1 kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla. Siyaphinda futhi ukuthi imithambo ye-glucose engasebenzi kahle ifihlekile. Kungabonakala ngesikhathi kuphela ngosizo lokuhlolwa kwegazi ushukela. Uma lesi sifo siqinisekisiwe, kufanele futhi ubheke umfutho wegazi nokusebenza kwezinso. Ukuze uthole lokhu, udokotela uzokunikeza ukuhlolwa kwegazi nokuchama okwengeziwe, ukululeka ukuthi uthenge ikhaya lokuqapha umfutho wegazi.
Imvelo yoshukela wegazi kwabesifazane abakhulelwe
Funda i-athikili enemininingwane, "Izinga Loshukela Wegazi." Qonda ukuthi le ndlela ehlukile ihluke kanjani kwabesifazane abakhulelwe nakuzo zonke ezinye izigaba zabantu. Lesi sihloko sibuye sitshele ukuthi okuhlosiwe kwehluka kanjani ekwelashweni kwesifo sikashukela kwezomhlaba phesheya nakumazwe akhuluma isiRussia. Imininingwane yethulwe ngendlela yamatafula alula.
Bona nesixhumanisi sevidiyo ngezansi. Kuyo, uDkt Bernstein utshela ukuthi isilinganiselo sangempela soshukela kwabesifazane abakhulelwe siyini nokuthi ukudla okunempilo kufanele kube njani. Funda ukuthi ungaqhubeka kanjani ngemithamo elincane le-insulin, noma unganawo imijovo, kulandela ukudla okufanele.
Unganciphisa kanjani ushukela kushukela wokukhulelwa?
Ukwelashwa ukwehlisa ushukela wegazi lesiguli hhayi ukulisebenzisa ngokweqile ukuze lingawi ngaphansi kokujwayelekile. Izindlela zokufeza le nhloso zichazwe ngokuningiliziwe kamuva kuleli khasi. Awekho amaphilisi asetshenziswayo. Ukudla kunqunyelwe, okuthi uma kunesidingo, kufakwe imijovo ye-insulin. Ukusebenza kakhulu ngokomzimba kusiza amazinga aphansi kashukela. Kepha ayinconywa kwabesifazane abakhulelwe, ukuze ungazithathi isisu.
Unganciphisa kanjani ushukela wasekuseni esiswini esingenalutho?
Funda i-athikili enemininingwane, "Ushukela esiswini esingenalutho ekuseni." Ngemvume kadokotela wakho, zama ukujova i-insulin ngobusuku obunye, njengoba kubhalwe kuyo. Lesi sihloko sikhuluma nangamacwecwe e-metformin. Kodwa-ke, lo muthi awuvamile ukubekelwa ukuthi abesifazane abakhulelwe behlise ushukela wegazi labo. Sebenzisa kuphela izondlamzimba zokudla kanye ne-insulin.
Isifo sikashukela sokukhulelwa: ukwelashwa
Ikhambi eliyinhloko ukudla. Uma kunesidingo, sengezwa ngemijovo ye-insulini emithanjeni ebalwa ngokuqondile, ngokohlelo ngalunye. Odokotela ngokwesiko banquma ukudla kwetafula 9. Kodwa-ke, lokhu kudla akusizi abesifazane abakhulelwe ukubuyisela ushukela kokujwayelekile. Iwebhusayithi endocrin-patient.com ikhuthaza ukudla okusebenzayo okune-carb okulula ukulawula i-metabolism glucose. Lokhu kudla kulungele izingane nabesifazane abakhulelwe. Funda kabanzi ngakho ngezansi. Ngokuqondene nokuzivocavoca umzimba, abesifazane abakhulelwe kufanele baqaphele ukuthi bangayenzi kahle inhlala-kahle yabo futhi bangavuki ukuchitheka kwesisu. Xoxa nodokotela wakho ngale ndaba. Ukuhamba ngezinyawo kungenzeka kuphephile futhi kusize.
Iyini ingozi yalesi sifo?
Isifo sikashukela sokutholwa komzimba singaba nemiphumela emibi kuzingane. Ngesikhathi sokuzalwa, ingane ingaba nesisindo esikhulu kakhulu somzimba - 4.5-6 kg. Lokhu kusho ukuthi ukuzalwa kuzoba nzima futhi kungenzeka ukuthi ingxenye yezesekeli izodingeka. Esikhathini esizayo, izingane ezinjalo zinengozi eyandayo yokukhuluphala nezinye izinkinga. Ngokuphikisana nesizinda sesifo sikashukela sokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe, ubungozi be-preeclampsia buyanda. Lokhu kuyinkimbinkimbi kubonakaliswa umfutho wegazi ophakeme, ukuvuvukala, kanye nokuvela kwamaprotheni kumchamo. Kungasongela impilo kamama nengane. Ezimweni ezinjalo, odokotela ngokuvamile abanakho ukukhetha ngaphandle kokubangela ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi.
Isisindo somzimba ngokweqile se-fetus sibizwa ngokuthi i-macrosomia. Ingane esanda kuzalwa ingaba nokuhlushwa ukuphefumula, ukuncipha kwezwi lemisipha, ukuvimbela i-reflex yokuncela, i-edema ne-jaundice. Lokhu kubizwa ngokuthi i-fetopathy yesifo sikashukela. Esikhathini esizayo, kungahle kube nokuhluleka kwenhliziyo, okulele ekukhuleni kwengqondo nangokomzimba. Owesifazane usengozini enkulu yesifo sikashukela sohlobo 2 esemncane. Ukudla okune-carb ephansi kugwema izinkinga ngesikhathi sokukhulelwa. Ibuyisela ushukela nomfutho wegazi. Imithamo edingekayo ye-insulin incishiswa kakhulu. Iziguli eziningi ziyakwazi ukulahla ngokuphelele ukuphathwa kwe-insulin ngenkathi zigcina izinga elijwayelekile likashukela egazini.
Ngabe isifo sikashukela sokukhulelwa siyadlula ngemuva kokuzalwa?
Yebo, le nkinga icishe ivele inyamalale masinyane ngemuva kokuzalwa kwengane. I-placenta iyayeka ukuthinta isizinda sehomoni. Ngenxa yalokhu, ukuzwela kwe-insulin namazinga kashukela egazini kubuyela kokujwayelekile. Iziguli eziningi zidinga imijovo ye-insulin kuze kube yilapho ziletha. Kodwa-ke, uma umthamo ophathisiwe walesi hormone ungayeki ukusebenza ngesikhathi, ngemuva kokuzalwa ushukela wegazi ungancipha ngokweqile. Odokotela bavame ukukucabanga lokhu lapho behlela imijovo ye-insulin. Ngemuva kokuphuma esibhedlela, lona wesifazane uhlala engozini enkulu yesifo sikashukela sohlobo 2. Kungenzeka futhi kube nezinkinga ngesikhathi sokukhulelwa okulandelayo. Ngakho-ke, kunengqondo ukulandela ukudla okune-carb ephansi ukuvimbela.
Odokotela ngokwesiko batusa ukudla # 9 kwabesifazane abanesifo sikashukela sokukhulelwa. Lokhu kudla kuhlanganisa ukunciphisa ukugcotshwa kwamafutha nekhalori, ukudla izikhathi ezingama-5-6 ngosuku ngezingxenye ezincane. Funda kabanzi ngayo esihlokweni esithi “I-Dietary tafula 9”. Inkinga ukuthi akusizi ukuguqula ushukela ngesikhathi sokukhulelwa. Ngoba lokhu kudla kugcwala ngokudla okwandisa ushukela wegazi. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yemikhawulo yekhalori, iziguli zithola indlala eyindlala njalo. Ukudla okujwayelekile okuvela njalo akusizi ukugwinya. Ukulinganiselwa okukhulu kokudla kwe-caloric ngesikhathi sokukhulelwa kuwumqondo ongathandeki.
Iwebhusayithi endocrin-patient.com incoma ukudla okune-carb ephansi ukulawula isifo sikashukela esisheshayo. Ukuqeda ngokuphelele ukudla okwandisa ushukela wegazi ngemuva kokudla. Ngakho-ke, ushukela ubuyela kokujwayelekile futhi ugcina uzinzile uvamile. Lokhu kudla kubuye kube nengcindezi yokucindezela kwegazi, kunciphise i-edema futhi kunciphise nengozi ye-preeclampsia. Isetshenziswa kabanzi ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2. Kusuka kushukela omkhulu ngesikhathi sokukhulelwa kuyasiza, ngaphandle kwemiphumela emibi eyingozi.
Bukela ividiyo yokuthi amaprotheni adliwayo, amafutha kanye nama-carbohydrate athinta kanjani ushukela wegazi. Isifo sikashukela sokukhulelwa kuxoxwa kuso imizuzu engu-5-7.
Ngokuthola okukhulu, kuzokwenzeka ngaphandle kwemijovo ye-insulin. Futhi uma kusadingeka ugwaze, uzodinga imithamo emincane.
Abantu abalandela ukudla kwe-carb ephansi kungenzeka babe nama-ketones (acetone) kumchamo wabo. Odokotela bavame ukwethusa abesifazane abakhulelwe ukuthi i-acetone emchameni inyusa amathuba okuphuphuma kwesisu. Lokhu akulona iqiniso. Engxenyeni yesibili yokukhulelwa, ama-ketones kumchamo angatholakala cishe kubo bonke abesifazane, noma ngabe badla ini. Abesifazane baseMelika sebevele banqwabelanisa isipiliyoni esiningi esingekho emthethweni besebenzisa ukudla okuqinile kwe-carb ngesikhathi sokukhulelwa. Lokhu okuhlangenwe nakho bekukuhle. Kwacaca ukuthi asikho isidingo sokwengeza izithelo noma amanye ama-carbohydrate emikhiqizweni evunyelwewe ukuze kususwe i-acetone. Hlola ushukela wakho kaningi nge-glucometer, futhi kungcono ukungalinganisi ama-ketones kumchamo wakho nakancane.
Bheka isixhumanisi sevidiyo ngezansi. Kuzokusiza ekusabiseni nge-acetone.Thola ukuthi ingakanani i-carbohydrate okudingeka uyidle ngokudla kwasekuseni, kwasemini nakusihlwa ukuze ulawule isifo sikashukela sokukhulelwa, zivikele ku-edema, umfutho wegazi ophakeme nezinye izinkinga.
Yini engingayidla ngesifo sikashukela sokukhulelwa?
Sebenzisa uhlu lwemikhiqizo evunyelwe, uhlu lwemikhiqizo engavunyelwe nemenyu yesampula yeviki. Ungathola izindlela zokupheka ezenziwe ngomumo bese uza nezakho, uma nje bebenemikhiqizo evunyelwe ngaphandle kokuphela kwenqatshelwe. Ukudla kungahluka, kumnandi futhi kwanelise, noma kube-chic, kuya ngesabelomali. Inawo wonke amaprotheni adingekayo, amafutha emvelo anempilo, amavithamini kanye nefayibha. Ama-carbohydrate awadingeki ekuthuthukisweni kwe-fetus. Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sokukhulelwa bangalimaza. Ngakho-ke, kungcono ukubakhipha ekudleni.
Iziguli zivame ukuthakazela kakhulu imikhiqizo elandelayo: okusanhlamvu, imbewu, amantongomane, namakhekhe, ubisi. Iporridge namakhekhe ngendlela emangalisayo kukhulisa ushukela wegazi. Kufanele zikhishwe ngokuphelele ngoba ziletha ukulimala okukhulu. Imbewu yelanga ingadliwa ngaphandle koshukela nezinye izinambuzane. Ezinye izinhlobo zamantongomane zikulungele, ezinye azizinhle kakhulu. Amantongomane amahle yiBrazil, macadamia kanye ne-hazelnuts. Okuhle ama-walnuts, ama-alimondi namantongomane. Amantongomane kaCashew akufanele adliwe. Amantongomane nembewu inempilo ngendlela ebomvu kunaleyo ethosiwe. Okuhle ungazisawoti ngoba zivimbela i-edema. Emikhiqizweni yobisi, ushizi onzima ufaneleke kangcono. Ungangeza ukhilimu ekhofi, kukhona iyogathi emhlophe emnyama ngaphandle kwezithelo noswidi. Ukusetshenziswa koshizi we-canta kungcono ukukhawula.
Kungani ungadli amaswidi?
Uju namanye amaswidi ngaso leso sikhathi futhi ngokumangazayo kwandisa amazinga kashukela egazi. Ungaqiniseka ngokulinganisa ushukela ngemuva kokudla nge-glucometer. Uma ukukhulelwa kuyinkimbinkimbi ngesifo sikashukela sokukhulelwa, le mikhiqizo iyingozi kowesifazane nengane yakhe engakazalwa. Ungasebenzisa i-stevia njenge-substitute ushukela. Ukusetshenziswa ngokulinganayo koshokholethi omnyama, nokuqukethwe kwe-cocoa okungenani ama-86%, kuyavunyelwa.
Hlobo luni lwezithelo engingazidla?
I-Cherry, ama-sitrobheli, ama-apricots, noma yiziphi ezinye izithelo namajikijolo akhulisa ushukela egazini futhi ngenxa yalokho alimaze kakhulu kunokuhle. Kungcono ukungazidli nhlobo. Abesifazane abakhulelwe abanoshukela omningi basizwe ukudla okwe-carb ephansi iminyaka eminingi. Kuze kube muva nje, bekunconywe ukwengeza izaqathe, ama-beet kanye nezithelo emikhiqizweni evunyelwe futhi enconyiwe yokususa i-acetone emchameni. Eminyakeni yamuva, izibalo ziqongelelekile, okukhombisa ukuthi lokhu akudingekile.
Abesifazane baseMelika abangamakhulu ambalwa baqinisekisile ukuthi bazala izingane ezinempilo ngaphandle kwezinkinga, kulandela ukudla okuqinile kwe-carb ephansi ngesikhathi sokukhulelwa, kuqeda izithelo ngokuphelele. Ukudla okuvinjelwe ngesikhathi sokukhulelwa kubangela ukukhuluphala ngokweqile kwesisindo, ukufaka isandla ku-edema, ukwandisa ushukela wegazi, umfutho wegazi kanye nengozi ye-preeclampsia. Ngabe kukufanele yini ukuzibangela zonke lezi zinkathazo ngenxa yenjabulo yomzuzu wezithelo?
Izithelo ezomisiwe ziyingozi njengezithelo ezintsha namajikijolo. Isidingo esibalulekile sezithelo nokunye ukudla okune-carbohydrate okugcwele inganekwane embi. Ama-carbohydrate, ngokungafani namaprotheni namafutha, akuyona imikhiqizo ebaluleke kakhulu yabesifazane abakhulelwe, zonke ezinye izigaba zabantu abadala nezingane. Ukwanda ushukela wegazi kukhombisa ukungabekezeleli kwe-carbohydrate ngumzimba wakho. Ngakho-ke, adinga ukukhawulelwa noma ahlukaniswe ngokuphelele ekudleni. Uzothola yonke i-fiber efanelekile kanye namavithamini kusuka emifino, amantongomane, iklabishi neminye imifino evunyelwe. Esikhundleni sezithelo ngesikhathi sokukhulelwa, zinakekele ekudleni okumnandi noma ekudleni kwasolwandle.
Kusetshenziswa yiphi i-insulin
Ngesikhathi sokukhulelwa, akuyona yonke izidakamizwa evunyelwe. Sebenzisa umuthi lapho ukuphepha kumiselwe umama nengane elindelwe. Le mishanguzo ifaka i-insulin eyakhiwe ngofuzo:
I-ultrashort - i-Humalog, Novorapid,
mfushane - uHumulin R, Actrapid NM, Insuman ngokushesha,
isenzo eside - Levemir, Insuman Bazal, Humulin NPH.
Esimweni ngasinye, akhethwa ngamunye. Isikimu sokuphatha kwabo sincike ekutheni iyiphi idatha etholakele ngenkathi kubhekwa ushukela wegazi nsuku zonke. Abesifazane abakhulelwe bavame kakhulu ukungena esibhedlela emnyangweni we-endocrinology ukuqokwa kokuqala kokulashwa kwe-insulin.
Izilinganiso zokugxilisa i-glucose zenziwa ekuseni ngesisu esingenalutho, khona-ke ngaphambi kokudla ngakunye nemizuzu engama-60 no-120 emva kokudla. Kudingeka izinkomba ezidingekayo nezasebusuku emahoreni angama-2, 4 no-6 ukunquma ukusabela kwe-insulin elimele.
Ngingayisebenzisa i-fructose yesifo sikashukela sokukhulelwa?
I-Fructose ingumkhiqizo olimaza kakhulu kune-glucose. Uqala ukwandisa ushukela wegazi hhayi nje ngemuva kokudla, kodwa ngokuhamba kwesikhathi.
Bukela ividiyo ku-fructose kushukela. Ixoxa ngezithelo, uju lwezinyosi, nokudla okukhethekile kwesifo sikashukela.
I-Fructose ayimunwa ngokushesha, kepha amahora amaningi. Uyakwazi ukubangela inkathazo enkulu ngenkathi umzimba uyicubungula. Ukudla okunesifo sikashukela okuqukethe lesi sithako kungubuthi obumsulwa. Hlala kude nabo. I-Fructose, etholakala ezithelo nakumajikijolo, yandisa ubungozi besifo sikashukela sohlobo 2 futhi yandisa lesi sifo. Ubufakazi obengeziwe buqongelela bokuthi ivuselela ukukhula kwe-gout futhi yandisa nobunzima bokuhlaselwa kwayo.
Lapho udinga ukuguqula ushukela wegazi ngokwejwayelekile, ezimweni ezinzima, awukwazi ukukwenza ngaphandle kwe-insulin. Ukudla kwe-carb ephansi, okuchazwe ngenhla, kuvumela abesifazane abaningi abakhulelwe ukugcina ushukela ojwayelekile ngaphandle kwemijovo. Ezinye iziguli zisadinga i-insulin. Kubo, ukondla okuphansi kwe-carbohydrate kaninginingi kunciphisa umthamo we-hormone. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi odokotela basekhaya abakajwayele imithamo ephansi ye-insulin enjalo.
Uma ufaka izithelo, amaswidi nokunye ukudla okuvinjelwe ekudleni kwakho, kuzofanela ukhuphule umthamo kanye nemvamisa yemijovo. Kulokhu, ushukela wegazi uzogxuma noma uhlale uphakeme ngokuqina. Khuluma nodokotela wakho uma udinga ukufaka i-insulin. Uma kunjalo, khetha uhlobo ngalunye lwe-insulin nodokotela wakho. Funda kabanzi ku-athikili "Ukubalwa kwemithamo ye-insulin ende yemijovo ebusuku nasekuseni" nokuthi "Ukukhetha imithamo ye-insulin emfushane ne-ultrashort ngaphambi kokudla."
Iyiphi i-insulin esetshenziselwa i-GDM?
Okokuqala, i-insulin ehlala isikhathi eside iqala ukujovwa. Ngokuvamile, i-Levemir inqunywe. Ngoba ubufakazi obukholisayo butholakele ngalolu hlobo lwe-insulin kwabesifazane abakhulelwe. Ungasebenzisa futhi enye yezidakamizwa ezincintisanayo iLantus noma iTresiba. Kuyinto engathandeki ukujova i-insulin ephakathi ye-Protafan noma enye yezinto zayo - uHumulin NPH, i-Insuman Bazal, i-Biosulin N, i-Rinsulin NPH.
Ezimweni ezinzima, ungadinga imijovo eminingi ye-insulin emfushane noma ye-ultrashort ngaphambi kokudla. Bangase banikeze umuthi i-Humalog, i-Apidra, i-Novorapid, i-Actrapid noma enye.
Abesifazane abakhulelwe ekudleni okuphansi kwe-carb ngokuvamile abadingi ukufaka i-insulin ngokushesha ngaphambi kokudla. Ngaphandle kwezimo ezingavamile lapho isifo sikashukela sohlobo loku-1 senziwa ngephutha lesifo sikashukela sokukhulelwa.
Okwamanje, kungcono ukugwema izinhlobo ze-insulin ezikhiqizwe ngaphakathi. Sebenzisa umuthi ongenisiwe osezingeni elifanele, noma ngabe kufanele uwuthenge ngemali yakho. Siyaphinda ukuthi ukulandela ukudla okune-carb ephansi kunciphisa umthamo odingekayo we-insulin ngezikhathi ezi-2-7 uma kuqhathaniswa nalezo odokotela abajwayele.
Ngabe i-insulin ihoxiswa kanjani ngemuva kokuzalwa kwengane kushukela wokukhulelwa?
Ngokushesha ngemuva kokuzalwa, isidingo se-insulin kwizifo sikashukela zesifazane sehla kakhulu. Ngoba i-placenta iyayeka ukufihla izinto ezinciphisa ukuzwela komzimba ngale hormone. Kungenzeka kakhulu, ukuthi uzokwazi ukuqeda ngokuphelele imijovo ye-insulin. Futhi ushukela wegazi ngeke uphakame, naphezu kwalokhu kukhanselwa.
Uma uqhubeka nokujova i-insulin ngemuva kokuzalwa kwengane emithanjeni efanayo naleyo ngesikhathi sokukhulelwa, izinga lakho likashukela lingehla kakhulu. Kungenzeka kakhulu, i-hypoglycemia izokwenzeka. Kodwa-ke, odokotela ngokuvamile bayayibona le ngozi. Banciphisa imithamo ye-insulin ezigulini zabo ngesikhathi ukuze bayivikele.
Abesifazane abake baba nesifo sikashukela sokukhulelwa belulekwa ukuthi bahlale ekudleni okune-carb ephansi ngemuva kokubeletha. Usengozini enkulu yokuba nesifo sikashukela sohlobo 2 ngemuva kweminyaka engama-35 kuya kwengama-40. Susa ama-carbohydrate ayingozi ekudleni kwakho ukuze ugweme le nhlekelele.
18 ukuphawula ngesifo sikashukela sokukhulelwa
Ntambama enhle, Sergey!
Ngineminyaka engama-30 ubudala, ukuphakama ngo-155 cm, isisindo esingu-47 kg. Ngesikhathi sokukhulelwa, ngithole ama-8-9 kg, kepha konke ngemuva kokuzalwa kwakungasekho. Ngesikhathi sokukhulelwa (kwakukhona i-IVF) ngemuva kwe-GTT, ukuxilongwa kwe-GDM kwenziwa, ijika leshukela 3.68 - 11.88 - 9.35. Igazi lalithathwe emunweni. Unikeze i-glycated hemoglobin 4.77%, C-peptide 0.98 (ejwayelekile kusuka ku-1.1). Ukudla nokuzivocavoca kwasiza. Ushukela wokuzila ukudla bekulokhu uphelele. Akukho-insulin eyayinqunyelwe. Kunconywa ukuphinda i-GTT izinyanga ezintathu ngemuva kokuzalwa. Ngibheke ukuvakasha kwe-endocrinologist kanye nokuqokwa kwi-GTT. Ukulinganisa ushukela nge-glucometer ekhaya, ngithole ukuthi lapho ngidla ama-carbohydrate, akhula ngehora ukuya ku-7-8, kwesinye isikhathi i-9. Ngayeka ukusebenzisa konke kusuka ohlwini lokudla okwenqatshelwe, ngaphumelela izivivinyo. I-Glycated hemoglobin engu-5.17%, i-C-peptide 0.64 (ejwayelekile ukusuka ku-1.1), i-insulin 1.82 (ejwayelekile kusuka ku-2.6), ushukela we-3.56. Ungangicela ungitshele uma amanani aphansi e-C-peptide akhombisa inqubo engenakuphikwa yesifo sikashukela? Nginovalo lokuthi ngaphambi kokuvakashela i-endocrinologist ezinsukwini ezi-5 ngizohlanya. Kunolwazi oluncane kakhulu ngalokhu. Ukushukela okusheshayo kuhlale kuyinto evamile ekudleni kwami; kugcina nokujwayelekile ngemuva kokudla nokudla. Ingane yazalwa ingenazimpawu zokuphazamiseka, isisindo esingu-3700, ukuphakama kuka-53. Ngiyabonga kusizo lwenu!
Ingabe i-peptide ephansi enjalo ibonisa inqubo yesifo sikashukela engenakuphikwa?
Yebo Awunaso isisindo ngokweqile, okuncane insulin yakho nokubekezelela kabi ama-carbohydrate. Lesi yisifo sikashukela sokuqala se-autoimmune. Ukukhulelwa kungasebenza njengesikhuthazo sokuqala kwayo.
Nginovalo lokuthi ngaphambi kokuvakashela i-endocrinologist ezinsukwini ezi-5 ngizohlanya.
Awunalutho okufanele ukhathazeke ngalo. Lesi sifo, esiqala ebudaleni, kulula. Akukhubazi ikhwalithi yempilo futhi akunciphisi isikhathi sayo, ngokulawula okuhle.
1. Landela ngokuqinile ekudleni okuphansi kwe-carb, zama ukudlulisa wonke umndeni kuwo.
2. Funda ukuthi ungazinikeza kanjani imijovo engenabuhlungu ngobuhlungu nge-insulin isiraphu usebenzisa usawoti ukuqeqeshwa, njengoba kuchazwe lapha - http://endocrin-patient.com/vvedenie-insulina/.
3. Bheka ushukela, ngokwesibonelo, kanye njalo emavikini amabili.
4. Zilungiselele ukujova i-insulin ngesikhathi somkhuhlane kanye nezinye izifo ezithathelwanayo.
Uma ungakwenzi konke lokhu, khona lapho eneminyaka engama-40-60 “isigaxa” senkinga yesifo sikashukela singakhula emilenzeni, kwamehlo, nasezinso. Hhayi, usukhulile ngokushesha kunontanga yakho. Ngakolunye uhlangothi, akunzima ukugcina ushukela ngokwejwayelekile, futhi ukuhambisana nohlu lokuphilayo akukuphazamisi empilweni. Ungenza noma yini, ube nezingane ezilandelayo.
Ngokuhamba kwesikhathi, kungahle kudingekile ukujova i-insulin, yize ulandela ukudla. Kodwa-ke, imithamo izobe ingenakuqhathaniswa uma iqhathaniswa naleyo esetshenziswa odokotela basekhaya nabanesifo sikashukela. Awungeke ube nezinto ezesabekayo ezibhalelwa ngabashukela abasebenza ngokudalwa yi-insulin.
Ngeke uvume ukuhlala noshukela wegazi 6-7, futhi nangaphezulu, ngaphezulu. Kumele ihanjiswe i-insulin ibe sezingeni eliphakeme lama-3.9-5,5 ngokuqina amahora angama-24 ngosuku.
USergey, ngiyabonga! Ukuchithile konke ukungabaza kwami ​​kokugcina. Ake ungitshele, bazonquma i-GTT yesibili, njengoba sekudlule amasonto ayi-12 kuzalwa. Ingabe kufanelekile ukukwenza esimweni sami? Ngiyaqonda ukuthi lokhu kuhlolwa ngeke kuyixazulule inkinga, futhi kuzoba nokulimala okuvela kumthwalo weglucose.
Futhi mayelana ne-insulin. Okusho ukuthi, ngize ngilinqume, uma ushukela ujwayelekile, kepha ugcine ulungile? Ngiyaxolisa uma ngibuza imibuzo yobuwula. Ngifuna ukwazi ukuthi ngingayakha kanjani inkhulumomphendvulwano ne-endocrinologist yami. Namanje ngisaqhubeka nokugwedla ngalesi simo. Noma kunjalo, ngiyawethemba umbono wakho. Ngiyabonga kusengaphambili!
Ake ungitshele, ngizokhetha i-GTT yesibili. Ingabe kufanelekile ukukwenza esimweni sami?
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose, futhi kuyindlela yokuhlolelwa i-glucose (i-GTT), kunengqondo ukukwenza kuphela ngesikhathi sokukhulelwa. Ngoba i-hemoglobin ye-glycated inikeza imiphumela engemihle kuphela lapho ushukela wegazi ophakeme usuvele ulimaze ingane.
Ngaphandle kwabesifazane abakhulelwe, akekho umuntu okufanele enze i-GTT. Kubi kakhulu ukuhlukumeza izingane ngalolu hlaziyo. Iba nemitha yeglucose enembile ekhaya. Hlola i-hemoglobin ye-glycated njalo.
Ngokomqondo, esikhundleni sokuthatha i-GTT, ungalinganisa ushukela ekhaya nge-glucometer izikhathi ezi-3 - ngaphambi kokudla okugcwele ama-carbohydrate, bese kuthi elinye ihora eli-1 nele-2 emva kwawo. Inqobo nje uma ucingo luyiqiniso. Ngisho namamitha kashukela egazi asekhaya anikeza imephu yephutha. Kepha akangeneleli. Ngokusemthethweni, akekho noyedwa ozovuma isincomo sokukala ushukela ekhaya nge-glucometer esikhundleni sokuphumelela ukuhlolwa kwelabhoratri.
ukulimala kusuka kokulayisha ushukela kuzoba
Udinga ukuchitha amahora angama-2-3 elabhorethri endaweni enovalo. Hhayi-ke, ukulimala okuvela kulayisha kwe-glucose nakho kunjalo.
Futhi mayelana ne-insulin. Okusho ukuthi, ngize ngilinqume, uma ushukela ujwayelekile, kepha ugcine ulungile?
Kulungile. Ungavilaphi ukuze ufunde ukuthi ungawenza kanjani umjovo ngama-insulin kanye ne-saline yomzimba ngaphambi kwesikhathi.
Ngifuna ukwazi ukuthi ngingayakha kanjani inkhulumomphendvulwano ne-endocrinologist yami.
Udokotela we-endocrinologist udinga kuphela ukukhubazeka, i-insulin yamahhala nezinye izinzuzo. Konke lokhu akukukhanyeli. Ngaphandle kokuthi kuzoba nezinkinga ezinkulu zesifo sikashukela, ozama ukuzivikela. Awudingi ukuya ku-endocrinologist.
Sawubona Nginentshisekelo kumbono wakho noma ngabe ngatholakala ukuthi unesifo sikashukela sokukhulelwa. Iminyaka engama-33 yobudala, ukuphakama okungu-169 cm, isisindo esingu-81 kg, okuyilapho ama-10 kg enyuka phakathi nokukhulelwa. Manje amasonto angama-29 ekhulelwe. Umphumela wejika leshukela: ukuzila ukudla - 5.3, ihora eli-1 ngemuva kokudla ushukela - 8.4, ngemuva kwamahora ama-2 - 8.7. Ngokushesha nganikwa lolu hlobo lokuxilonga olwesabekayo, yize imiphumela yayingaphezulu kokujwayelekile. Ngaphambi kokuphasa izivivinyo, ngabhekana nengcindezi, ngoba kwakukhona umugqa kanye namahlazo ngaphansi komnyango, bekumele ngihambe amabanga amade, angikwazanga ukwamukela nhlobo ngalolo suku. Futhi, kusihlwa angizange ngiphuze amanzi - ngangicabanga ukuthi akunakwenzeka. Odokotela sebesevele bengihlolile la makhadi ekhadini, njengokungathi bahlukunyezwa. Ngabe kunjalo? Ngabe kuzodingeka impela ufake i-insulin?
Odokotela sebesevele bengihlolile la makhadi ekhadini, njengokungathi bahlukunyezwa. Ngabe kunjalo?
Umbuzo wakho awunakuphendulwa ngokungathandeki. Kunoma ikuphi, ushukela wegazi wakho uphakeme kunendlela ongathanda ngayo. Kungakhathaleki ukuthi le nkinga inembe kangakanani, kubalulekile kuwe ukuthi ushintshele ekudleni okune-carb ngesikhathi sokukhulelwa futhi uqhubeke nokuvimbela isifo sikashukela sohlobo 2.
Ngabe kuzodingeka impela ufake i-insulin?
Udinga ukushintshela ekudleni okuqinile kwe-carb, udle kuphela izidlo ezivunyelwe - http://endocrin-patient.com/chto-mozhno-est-pri-diabete/.
Hlala phezu kwayo izinsuku ezintathu, ulinganise izinga likashukela wakho izikhathi eziningana ngosuku, ikakhulukazi ekuseni ngesisu esingenalutho kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla. Ngokunokwenzeka, uzobuyela kokujwayelekile noma ngaphandle kwemijovo ye-insulin.
Ezimweni ezingavamile, ukudla okwanele akwanele. Bese uxhuma i-insulin, isibonelo, i-Levemir. Qala ngemithamo ephansi yamayunithi ama-1-3, hhayi ngokushesha ngamanani aphezulu, njengoba odokotela abajwayele.
Sawubona. Ngineminyaka engama-40, isisindo esingu-117 kg, ukuphakama okungama-170 cm, ukukhulelwa kwesibili amasonto angama-29. Ngesikhathi sokukhulelwa ngathola ama-20 kg. Ukusheshisa ushukela 5.2 - 5.8. I-Levomir insulin yabekwa amayunithi ama-3 ekuseni nenani elifanayo kusihlwa. Ngilandela ukudla. Ake ungitshele, kungenzeka ukuthi ungene esikhundleni se-Levemir insulin ngeTujeo?
Ake ungitshele, kungenzeka ukuthi ungene esikhundleni se-Levemir insulin ngeTujeo?
Kwabashukela abanesifo sikashukela abalandela ukudla okune-carb ephansi, kwanele ukuzijova ngemithamo ephansi ye-insulin, kaningana ephansi kunaleyo ejwayelekile. Kumadosi anjalo, amalungiselelo kaLevemir noTujeo empeleni awazibangeli izinkinga. Ngineziguli ezijova iTujeo futhi zihamba kahle.
Noma kunjalo, angiqiniseki ukuthi amazwe e-CIS asuvele avumele iTujeo kwabesifazane abakhulelwe noma cha. Cacisa lokhu.
Ukusheshisa ushukela 5.2 - 5.8. I-insulin ebekiwe
Ushukela wakho wokuzila awuphakeme kakhulu. Shintshela ekudleni kwe-carb ephansi okuchazwe kulesi siza.Kungenzeka kakhulu ukuthi ngeke udinge ukujova i-insulin ngokuphelele.
Sawubona Ngitshele ukuthi ngenzeni ngemikhiqizo engekho kuhlu lwezinto ezivunyelwe nezenqatshelwe? Yimalini enkulu yama-carbohydrate okumele aqukethe kumkhiqizo, ukuze ivunyelwe i-GDM? Ushukela wokuzila kuphela lenyuka, phakathi nosuku ihora eli-1 ngemuva kokudla, uhlala ngaphakathi kwe-6.0.
Yini okufanele uyenze ngemikhiqizo engekho kuhlu lwezinto ezivunyelwe nezenqatshelwe?
Ungasebenzisa imitha ukubheka ukuthi balithinta kanjani ushukela wegazi lakho
Yimalini ephezulu yama-carbohydrate kumele aqukathwe kumkhiqizo, ukuze uvunyelwe
Alikho ngaphezulu kuka-10-12%. Ngokuvamile, kuya ngesilinganiso sokutholwa kwalezi zakhamzimba.
Sawubona ntambama Siyabonga ngesiza. Ngiyethemba impendulo yakho.
Iminyaka yami ineminyaka engama-35 ubudala, ukuphakama okungu-170 cm, manje sekuyimizuzu eyi-12 ekhulelwe, isisindo esingu-72 kg.
Nginezingane ezine, njengamanje ukukhulelwa kwesihlanu. Ngenkathi yesine, kwenziwa i-diagnostic ye-GDM, kususelwa ku-GTT, okwenziwa ngeviki lama-28. Ushukela wokuzila kwakungu-6.1, namahora ama-2 ngemuva kokudla - okujwayelekile. Ngagcina ukudla, ngathenga i-glucometer. Konke ukukhulelwa kwagcina ushukela kungakapheli imikhawulo ejwayelekile. Izingane zonke zikhulu, ngaphandle kwezokuqala, kepha asimcabangi, wazalwa ngaphambi kwesikhathi. Ngemuva kokuzalwa, kwakungekho ukwanda koshukela wegazi, noma ngingazange ngilandele indlela yokudla. Ngivele ngazama ukungadli ufulawa namaswidi, yize kunzima kimi. Ngikhumbula isikhathi sokudliwayo njengephupho lobusuku. Kumenyezelwe, kwehle izingane. Wanikeza i-glycated hemoglobin zombili ngesikhathi sokukhulelwa nangemva kokubeletha - okujwayelekile.
Manje sekungamaviki ayi-12 kuphela, kanti ushukela osheshayo ku-glucometer ngu-5.7-6.1. Ngemuva kokudla, ihora nesibili kusemkhawulweni ojwayelekile. Hlala phansi futhi ekudleni.
Nginombuzo kuwe: ingabe le GDM emsulwa? Kungani kuhlale njalo ukuthi ngiphakamisa ushukela wokuzila nje ekuseni? Ngosuku lwesithathu ekudleni. Izolo ngike ngafuna ipiki elilodwa ntambama, okunye okunye ukudla bekuyiprotein namafutha kuphela, kwathi ekuseni ngo-6.1. Ngabe inkulu kangakanani ingozi ebhubhini likashukela lwangempela? Ingabe konke kuphila ekudleni?
Nginombuzo kuwe: ingabe le GDM emsulwa?
Angiqondanga ukuthi usho ukuthini
Kungani kuhlale njalo ukuthi ngiphakamisa ushukela wokuzila nje ekuseni?
Lokhu kunjalo kwabanesifo sikashukela iningi
Ingakanani ingozi yokuba nesifo sikashukela soqobo esikhathini esizayo?
Usengozini enkulu yesifo sikashukela, ukushaya kwenhliziyo okuqala, noma unhlangothi. Ukukhulelwa ngakunye kunokukhubazeka okune-metabolic okwandayo.
Kuya ngezinhloso nezinhloso zakho.
Sawubona ntambama Iminyaka engama-32, ukukhulelwa kokuqala, amasonto angama-32, ama-68 kg, ukuphakama okungu-179 cm, ngaphambi kokukhulelwa kube isisindo esingu-60 kg. Ushukela ekuseni kwaba ngu-5.2-5.5, ngemuva kokudla kwaze kwaba ngu-7.2, ngadla ukudla, ngafakwa kuzo zonke izithelo, ngathola amayunithi we-insulin 6. Umbuzo wami uthi: uma ngemuva kokudla ngiba noshukela kusuka ekuseni kuya ku-5.0 nangemva kokudla kuya ku-7.0, ngidinga ukufaka umjovo i-insulin?
uma ngemuva kokudla ngiba noshukela kusuka ekuseni kuya ku-5.0 futhi ngemuva kokudla ngifika ku-7.0, ngidinga ukufaka umjovo i-insulin?
Okungenzeka kaningi akudingekile.
Ungesabi ukulandela ukudla okuqinile kwe-carb, njengoba kuchaziwe kuleli sayithi, ngesikhathi sokukhulelwa. Akuyona ingozi futhi kuwusizo olukhulu.
Sawubona ntambama Ngineminyaka engama-30, ukukhulelwa kwesibili kuyiminyaka engama-1,3 emva kweyokuqala. Manje i-GDM ibilokhu isekwelashweni kokudla kusuka emavikini angama-29. Yiziphi izivivinyo okudingeka zenziwe ngemuva kokubeletha ukuze kuhlolwe izingozi zokuthola ushukela esikhathini esizayo futhi uqonde enginakho nge-carbohydrate metabolism? Ukuthi kunezingozi futhi kungakuhle ukuthi unamathele ekudleni impilo yami yonke, ngabona.
Yikuphi ukuvivinya okudingeka kwenziwe ngemuva kokuzalwa kwengane ukuze kuhlolwe ubungozi obukhona besifo sikashukela
Akudingeki zidluliswe kube kanye, kepha zivivinywe njalo. Okungenani kanye ngonyaka - i-glycated hemoglobin ne-C-peptide.
Ntambama enhle, ngineminyaka engama-29 ubudala, isifo sikashukela sineminyaka engu-8, ngihlela ukukhulelwa. Kwakunombuzo nge-insulin. Okwamanje ngamukela iTujeo ne-Apidra. Ngifunde ukuthi laba bantu abafaka insulin abafundiswanga futhi bathinta kabi isibeletho. Uhlobo luni lwama-insulin ocabanga ukuthi luphephile ingane? Ngingathanda okungcono kakhulu.
Ngineminyaka engama-29 ubudala, isifo sikashukela sineminyaka engu-8, ngihlela ukukhulelwa
Funda iVkontakte esidlangalaleni "injabulo yokuba ngumama", ize ifundelwe. Ngokunikwa isifo sakho sikashukela, ngokomqondo siphindaphindeke ngo-2 konke okubhaliwe lapho. Usengozini enkulu. Kwabesifazane abaningi abanesifo sikashukela, ukukhulelwa nokubeletha kuyinto evamile. Kepha ngobuningi, azikadluli. Ababhali nje kwi-Intanethi. Lapho unezinkinga ngezinso noma ngamehlo, akuba njalo.
Akukhona ukuthi ngikukhipha nge-100%. Kepha ngiyakuxwayisa ukuthi ubungozi bukhulu. Kuphakama kaningi kunokubonakala "kusuka ngaphandle", uze ungene "ngaphakathi".
Uhlobo luni lwama-insulin ocabanga ukuthi luphephile ingane?
Uma kungenzeka, suka eTujeo uye eLevemir. Kepha lokhu akubaluleke kangako kunokudla okunempilo, ukukhetha kahle imithamo ye-insulin, ukubhekisisa ushukela nokunye ukuhlolwa.
Imithamo yesifo sikashukela sokukhulelwa
Imvamisa, abesifazane banikezwa imijovo emi-4 ye-insulin. Ezintathu kuzo zibanjwa imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla. Kusetshenziswa izidakamizwa ezibamba amafushane, bese kuthi owesine (enwetshiwe) uphathwe ngamahora angama-22. Ukujova kokugcina akuyona eyawo wonke umuntu.
Futhi ngemuva kokudla, izinsiza zakho azanele ukunqoba ukumelana ne-insulin, ngakho-ke udinga ukuyifaka ngokungeziwe.
Ukubalwa komthamo kwenziwa ngokuya ngezinga le-glucose egazini, i-trimester yokukhulelwa. Ezinyangeni ezintathu zokuqala, isidingo sehomoni esingezansi 1 iyunithi nge-1 kg yesisindo somzimba. Ezimweni eziningi, iziguli zikwazi ukulawula ushukela wegazi ngokudla noma zengeze imithamo emincane ye-hormone kuyo.
I-trimester yesibili inzima kakhulu kwisifo sikashukela sokukhulelwa. Kumfazi okhulelwe, umthamo unyuka cishe izikhathi ezi-1.5-2, kuthi nge-trimester yesithathu i-pancreas ye-fetus iqale ukusebenza, asikho isidingo semithamo emikhulu.
Ngesikhathi sokuzala ingane ngemuva kokuphathwa kwe-insulin, ukuhlaselwa kwe-hypoglycemia kuvame ukwenzeka. Zibangelwa ukwehla okubukhali kwamazinga kashukela. Ngakho-ke, kubalulekile:
landela izincomo ngokuqinile ngesikhathi sokudla ngemuva komjovo,
ukwazi ukubala umthamo wehormon ngokuya ngobuningi beshukela kanye nenani lama-carbohydrate ekudleni,
nokusabalalisa ngokulinganayo ukudla kwe-carbohydrate usuku lonke,
qaphela ushukela wegazi okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku.
Futhi nakhu okunye mayelana nesidakamizwa Sikashukela sikashukela.
Ukuqokwa kwe-insulin kuboniswa kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sokukhulelwa ngokudla okwanele, ukuzivocavoca nomuthi wamakhambi. Imijovo yeHormone nayo isetshenziselwa izimpawu zesifo sikashukela. Ukukhetha isidakamizwa, isheduli lokuphatha kanye nemithamo, kuyadingeka ukubheka amazinga kashukela wegazi namarekhodi we-trimester. Lapho ukwelashwa kwe-insulin kubalulekile, kubalulekile ukulandela ngokuqinile izincomo zokuhlanganisela ukudla, izikhathi zokudla, nokuziqapha kwe-glucose yegazi.
Ngaphandle kokwehluleka, omama abakhulelwe banikezwa ukudla kwesifo sikashukela sokukhulelwa. Ukudla okukhethwe kahle, itafula elenzelwe ukuhlangana kuzosiza ukugwema imiphumela emibi. Kungenzeka yini ukudla ikhabe, ikhabe? Yimiphi imenyu efanelekile sikashukela sokukhulelwa?
Uma isifo sikashukela sisungulwa ngokuthembekile, ama-glucometer aba abangane abangashintshiwe besiguli. Kubalulekile ukuyikhetha kahle futhi unqume izinkomba. Yini edingekayo kohlobo 1 no-2, onesifo sikashukela sokukhulelwa? Ungayithola kanjani i-glucometer yamahhala?
Ukuvimbela isifo sikashukela kwenziwa kokubili kulabo abamiselwe ukubonakala kwayo kuphela, nakulabo asebegula. Isigaba sokuqala sidinga ukuvimbelwa okuyinhloko. Izinyathelo eziphambili ezinganeni, abesilisa nabesifazane zincishiswa ekudleni, ekusebenzeni ngokomzimba kanye nendlela yokuphila efanele. Ngohlobo 2, kanye no-1, i-prophylaxis yesibili neyaphezulu yenziwa ukugwema ubunzima.